एउटै परिवारका दाजु–भाइको छ दिनको अन्तरमा कोरोनाले मृत्यु – नेपाली सूर्य
November 9, 2020 Nepali SuryaLeaveaComment on एउटै परिवारका दाजु–भाइको छ दिनको अन्तरमा कोरोनाले मृत्यु
विराटनगर : कोरोना भाइरस संक्रमित मोरङको केराबारी गाउँपालिका–३ को एउटै परिवारका दाजु–भाइको छ दिनको अन्तरमा मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमित ५७ वर्षीय भाइको मृत्यु भएको छ दिन बित्न नपाउँदै ५९ वर्षीय दाजुको पनि ज्यान गएको हो।
भाइलाई कात्तिक ५ गते कोरोना पुष्टि भएपछि उपचारका लागि धरान लगिएको थियो। उपचारकै क्रममा १३ दिनपछि उनको कात्तिक १८ गते मृत्यु भएको प्रतिष्ठानका सह–प्रवक्ता डा. आशिष श्रेष्ठले जानकारी दिए। मृतकमा मधुमेह र उच्च रक्तचापको पुरानै समस्या रहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। उनी केराबारीको एउटा विद्यालयका शिक्षक हुन्। गाउँपालिका अध्यक्ष रोहित कार्कीका अनुसार उनी शिक्षक महासंघ केराबारीका अध्यक्ष र पालिका स्तरीय कोभिड–१९ नियन्त्रण समितिका सदस्य थिए।
छ दिनभित्र दाजु–भाइको मृत्यु हुँदा परिवार ठूलो शोकमा रहेको भन्दै उनले सिंगो गाउँपालिका भने असल व्यक्तिहरु गुमाउनु परेको पीडामा रहेको सुनाए। annapurnapost
पारस खड्काले गरे गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको भ्रमण (फोटोफिचर)
को हुन् आर्यन खानसँगै ड्रग्स केसमा पक्राउ परेकी यी सुन्दरी?
May 22, 2021 May 22, 2021 Nepali Surya